Food Archives | Gcina A Isitimela
ekhaya > Food
Kwihlabathi liphela, Ukupakisha kuneziphumo ezahlukeneyo nezenzo, umzekelo: Ukucebisa eMzantsi Afrika kuyafuneka, njengoko kunjalo e-USA. Kulindeleke ukuba ushiye inqaku phakathi 15 yaye 25% eMelika, and if you don’t you may very…
Akukho mntu owaziyo ngokwenene ibali yokwenene chips eFransi. Asinakukwazi qiniseka ukuba avela France, kukonke. Yima, Intoni?! Yeap, uvile ukuba ekunene – kokubini lithanda yaye French Ufune ukutya, and they both have stories to…
Kukho into emangalisayo ezalisekisa ngayo cwaka beqwalasele phandle i window kaloliwe, musa ukuba? ke, ekhohlwa frisks zokhuseleko lamakholwane, iingxowa Ziplock ezicacileyo ulwelo, zero nemfihlo iibhasi yangasese-ngaphantsi. Akukho ndlela engcono ukuba ukuhlola eYurophu kunokuba ngololiwe ngoDisemba. Apha zi…
Ukutya kuqaqambe kakhulu, ukutya okumnandi ngakumbi. Kulula kakhulu ukuba azenze ngayo xa ehlala eYurophu ukunika isizathu kakhulu kuba! Izixeko kakhulu Foodies ase Europe, Sithemba ukuba thina foodies ngokunjalo, and so will you…